जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउने इच्छा छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् पुरा हुनेछ तपाईको इच्छा – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउने इच्छा छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् पुरा हुनेछ तपाईको इच्छा
काठमाडौँ । हरेक महिला आमा बन्ने चाहना राख्छिन्, किनभने महिलालाई विश्वास छ कि उनको बच्चाले उनको जीवनलाई पूर्ण बनाउनमा मद्दत गर्दछ। र केहि महिलाहरू जुम्ल्याहा बच्चाहरूलाई पनि जन्म दिन चाहन्छन्, उमेर बढी हुनुको कारण कोही महिलाहरुले जुम्ल्याहा बच्चाको बारेमा सोच्ने गर्दछन् भने कोही चाहान्छन् ।
यदि तपाईं यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए पहिले तपाईंलाई जुम्ल्याहाहरू कसरी हुन्छन् भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। जुम्ल्याहा दुई प्रकारका हुन्छन्, पहिलो, जब महिलाको अंडाशयबाट निकालेको अण्डा एकल स्पर्मद्वारा निषेचित हुन्छ, तर पछि दुईमा विभाजन हुन्छ।
तिनीहरू समान प्लेसेंटामा जोडिएका छन् तर अण्डाहरूको विभिन्न भागहरूमा भ्रुणहरूको विकास हुन्छ। तिनीहरूलाई मोनोजाइगोटिक जुम्ल्याहा भनिन्छ जो देख्नमा समान हुन्छन्। जबकि कहिलेकाँहि अण्डाशयबाट बाहिर निस्कने दुई अण्डालाई विभिन्न शुक्राणुद्वारा निषेचित गरिन्छ, र तिनीहरूको प्लेसेटमा पनि फरक फरक हुन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
जुन जुम्ल्याहा बच्चा हेर्दा फरक फरक छन् । तिनीहरूलाई मथकनयतष्अ जुम्ल्याहा भनिन्छ। यदि तपाईं गर्भवती हुने प्लान सोच्दै हुनुहुन्छ र जुम्ल्याहा बच्चाहरूलाई जन्म दिन चाहनुहुन्छ भने, यसको लागी तपाईंलाई धेरै कुराको हेरचाह गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए आउनुहोस् अब हामी जान्दछौं कि जुम्ल्याहा बच्चाहरूलाई जन्म दिन के कुरा ध्यान दिनुपर्दछ।
किनभने यस समयमा प्रोलेक्टिन हार्मोन शरीरमा उत्पादन हुन्छ र साथ साथै शरीरमा इस्ट्रोजेनको स्तर पनि घट्छ। यस कारणले, निषेचित अण्डाहरूलाई गर्भाशयमा सम्मिलित हुन लामो समय लिन्छ र अण्डाहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने सम्भावना बढ्छ र जुम्ल्याहा हुने सम्भावना पनि बढ्छ।